Ụbọchị My Pet » Top 10 Atụmatụ maka Ọma dịwara
emelitere ikpeazụ: Jul. 07 2020 | 2 min agụ
Gịnị ka ihe ịga nke ọma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị pụtara? The azịza nke ajụjụ a na-adabere na gị onwe gị na-ele ndụ na ihe mgbaru ọsọ i setịpụụrụ onwe gị mgbe akpa. E nwere ndị na n'ihi na onye a ụbọchị bụ ịga nke ọma nanị ma ọ bụrụ na ọ bụ a ụzọ ámá n'ebe a ogologo okwu mmekọrịta na ọbụna alụmdi na nwunye. Ndị ọzọ nwere ike na-atụle ya a ọdachi ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị n'elu àkwà. n'ihi na ụfọdụ, a ụbọchị bụ ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ha nwere ezigbo oge. Ọ bụ ezie na ọ dịghị nkwa na ndị na-esonụ Atụmatụ ga-atụgharị ọ bụla ụbọchị n'ime a gbawara, Ha ga-enyere gị belata gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdịda ọnụego.
Imeghari anya gị na nzube
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ oru ngo ị na-etinye aka n'ime, gị na-atụ anya na onye ị na-akpa ma ọ bụ site na ụbọchị ya ga-emegharị gị ebumnobi. Ọ bụrụ na ị na-achọ otu abalị-nguzo, adịghị na-enyocha gị na onye òtù ọlụlụ dị ka ma ọ bụrụ na ị na-aga na-emefu ná ndụ gị na ya / ya.
Mee a nhọrọ nke gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị aga ime
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka iwelie ịga nke ọma gị ọnụego, adịghị na-akpa onye ọ bụla yiri dị. Ebipụ ndepụta nwere AFỌ ndị niile na onye ị na-adịghị ihe ọ bụla na-emekarị.
A ụbọchị abụghị ohere iji gosipụta gị egwuregwu nkà. Mee ndammana na adịghị agbalị ka hà na ị bụ ihe ọzọ karịa ị bụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ a ogologo oge mmekọrịta. Nke bụ eziokwu ga-esi mesịrị na ndị ọzọ na ga na-eche daba.
Mee ihe dị mfe
Kasị aga nke ọma ụbọchị bụ ndị dị mfe, ukporo ndị. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a mbụ kpuo ìsì kpam kpam ụbọchị, na-eche banyere gị nkịtị ọdịmma na-abịa na ụfọdụ na-eme ihe dabeere na echiche ndị na-nwere ike ịrịọ unu abụọ.
Lekwasị anya ugbu
Ekwela ka ndị gara aga n'ime mkparịta ụka na a mgbe niile ma echela mkpesa banyere gị okpu mmekọrịta n'ime a àgwà. Ezie na ọ bụ ihe dị mkpa na di na nwunye na ihe banyere ha na ndabere, ọ dịghị onye chọrọ tụnyere bụbu. The eme n'ọdịnihu bụ a siri isiokwu nakwa. Ekwela ka ya ma ọ bụrụ na i ji n'aka na ma gị na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ibe dị njikere maka ndị dị otú ahụ a isiokwu.
Lee gị mma
N'agbanyeghị ihe ndị na-ekwu, a mbụ ụbọchị bụ mgbe niile banyere ọdịdị na n'ozuzu echiche. Ya mere, ndokwa onwe gị ya: na-etinye na ụfọdụ-eme ka elu, na-eyi ihe na-anya ọma gị na-amụmụ ọnụ ọchị. Otú ọ dị, adịghị akwụsị na-elekọta onwe gị mgbe ị na-eche na ị bụ a mmekọrịta.
Nọgidenụ na-ụkwụ gị n'ala
N'agbanyeghị otú oké gị ụbọchị yiri, ịnọgide na-ezi uche. Unu na-awụlikwa elu n'ime bed, na ọ dịghị ihe ọzọ na mbụ ụbọchị. Unu na-amalite na-ekwu banyere agbamakwụkwọ na ụmụ nanị n'ihi na-amasị gị otu ihe nkiri.
Kwadebe onwe gị maka ụbọchị
Ụbọchị nkwadebe adịghị agụnye nanị ịdị ọcha, esi ísì ọma na-achọ smart. Ọ bụrụ na ị bụghị na a na-akpa n'ihi na a ogologo oge, na-eche banyere isiokwu nke mkparịta ụka nke mere na i zere ihe ize ndụ nke ogologo ihere silences.
Gaa karịrị anya
Dị nnọọ n'ihi na ndị mmadụ hà na-smart, n'eziokwu na ndị na-alụbeghị di, ọ pụtaghị na ha n'ezie na-. Enweghị ridiculously chere ihe niile na mmadụ niile, agbalị ịnọ si ndị ụgha na-achịkọta ihe ọmụma zuru ezu iji a echiche onwe onye.
Ọ bụghị n'elu-ụbọchị
N'agbanyeghị ihe mere i ji na-na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha, adịghị aghọ sikwara ike njite na adịghị overdo ya. Akpa onye ọ bụla nke gbara gị gburugburu na-adịghị dịkwuo gị Ohere ịga nke ọma. Ọzọ, ị ga-iyi ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akpali ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ ndị ọzọ na-elekọta mmadụ ndụ e wezụga mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.